ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ ညီလာခံသို့ တက်ရောက်နေသည့် အတိုင်ပင်ခံရုံး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ညီလာခံ လေးရ?? - Yangon Media Group
တစ်ပတ်အကြာ ကျင်းပလျက်ရှိသည့် (၇၃)ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ၏ အထွေထွေမူဝါဒရေးရာဆွေးနွေးပွဲသို့ မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တက်ရောက်လျက်ရှိပြီး ညီလာခံ လေးရက်မြောက်နေ့တွင် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက အထွေ ထွေမူဝါဒရေးရာမိန့်ခွန်းကို ပြောကြားသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်သည်။
အဆိုပါညီလာခံသို့ မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင့်ဆွေ၊ ကိုယ်ခွဲခေါင်းဆောင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်၊ ကုလသမဂ္ဂ ဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် သံအမတ်ကြီး ဦးဟောက်ဒိုဆွမ်း၊ အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးအောင်လင်းတို့ တက်ရောက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ ညီလာခံအား စက်တင်ဘာ ၂၅ ရက်မှ အောက်တိုဘာ ၁ ရက်အထိ ကျင်းပနေခြင်း ဖြစ်သည်။ ညီလာခံသို့ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံပေါင်း ၁၉၃ နိုင်ငံမှ နိုင်ငံ့အကြီးအကဲ၊ အစိုးရအကြီးအကဲနှင့် ဝန်ကြီးအဆင့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များ၊ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာအန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်တို့ တက်ရောက်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်နှင့် သဘာပတိတို့က အဖွင့်စကားပြောကြားခဲ့ပြီး အထွေထွေမူဝါဒရေးရာ ဆွေးနွေးပွဲကို ဆက်လက်ကျင်းပရာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မစ္စတာဒေါ်နယ်ထရန့်အပါအဝင် နိုင်ငံပေါင်း ၃၁ နိုင်ငံတို့မှ သမ္မတများက အထွေထွေမူဝါဒရေးရာမိန့်ခွန်းများ အသီးသီးပြောကြားခဲ့ကြသည်။ ညီလာခံသို့ တက်ရောက်လျက်ရှိသည့် မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ပြည် ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင့်ဆွေကလည်း စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်တွင် အထွေထွေမူဝါဒ ရေးရာမိန့်ခွန်းကို ပြောကြားသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားသည်။
မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ညီလာခံသို့ တက်ရောက်လာချိန် စက်တင်ဘာ ၂၅ ရက်ကလည်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်သည် ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်ရှိ Trusteeship Council ခန်းမ၌ ကျင်းပသော High- Level Meeting on Action for Peacekeeping သို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ လိင်အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် Ms. Pramila Pattern နှင့်လည်းကောင်း၊ ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီး Mr. Filippo Grandi နှင့်လည်း အသီးသီးတွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရဟောင်းထံမှ ရရှိမည့် ကြွေးမြီကျပ်သန်း ၃ဝဝဝ အနက်မှ ပထမအရစ်အဖြစ် က?
စုမဲငွေ လိမ်လည်နေမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်သူသို့ ပညာပေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး က
တရားစီရင်ရေး ၊ ဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် တိုင်ကြားစာ ၊ အသနားခံစာများ စိစစ်ရေးကော်မတီဥက်္ကဋ္ဌ ဦြး??